Anguilla dia nanambara ny Protocols manokatra ny dingana voalohany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Anguilla dia nanambara ny Protocols manokatra ny dingana voalohany
Anguilla dia hanomboka hanaiky ny fangatahana fidirana avy amin'ireo mpitsidika maniry ny ho any amin'ny nosy hatramin'ny 21 Aogositra 2020. Ny fanambarana dia nataon'i Hon. Quincia Gumbs-Marie, sekretera parlemantera misahana ny fizahan-tany, tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny praiminisitra Hon. Dr. Ellis Webster ny alakamisy 13 aogositra 2020. Ny sekretera parlemantera dia mitarika ny vondron-kery miandraikitra ny ezaka fanokafana indray; Ny dingana voalohany dia hanomboka amin'ny 21 aogositra ka hatramin'ny 31 Oktobra 2020.
"Maimaimpoana COVID-19 i Anguilla amin'izao fotoana izao, noho izany ny tanjonay dia ny hisokatra hatrany amin'ny fomba malina, handray ny fepetra rehetra hiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mponina sy ny vahininay," hoy Rtoa Gumbs-Marie. "Nanatri-maso ny fivoaran'ny sasany amin'ireo nosy mpifanila vodirindrina aminy izahay, ary noho izany dia nametraka protokolola tena hentitra izahay, miorina amin'ny fahafahantsika mitazona sy manalefaka ireo loza ateraky ny tranga nafarana," hoy hatrany izy.
"Manantena ny handray tsara ireo vahininay hiverina any Anguilla izahay, am-pilaminana sy andraikitra," hoy i Kenroy Herbert, filohan'ny Birao fizahan-tany Anguilla. “Fantatsika fa be ny fangatahana mihoampampana ho an'i Anguilla, eo amin'ireo tompon-tranonay, ireo vahininay averimberina, ary ireo izay mila fialan-tsasatra fotsiny amin'ny fihenjanana sy ny fihenjanana mandritra ny volana maro lasa. Manolotra fitsangatsanganana mahafinaritra izahay, toeram-pialofana azo antoka hipetrahanareo sy hankafizanay ny torapasika mahatalanjona sy ny fahafinaretanay momba ny sakafo, ao anatin'ny fampiononana avy amin'ny villa mahafinaritra iray, ny tranonareo izay lavitra ny trano. ”
Hatramin'ny zoma 21 aogositra, ireo mpitsidika maniry hiditra Anguilla dia mety hanomboka ny fizotran'ny fisoratana anarana mialoha amin'ny Internet ao amin'ny Ny Birao Mpizahatany Anguilla tranonkala. Ny fangatahana fangatahana dia misy ny adiresy an-tranon'ny mpitsidika sy ny daty hanaovana ny dia; ny fandefasana fitsapana PCR ratsy, nalaina tao anatin'ny telo ka hatramin'ny dimy andro talohan'ny nahatongavany; ary ny politikam-piantohana ara-pahasalamana izay hiantoka ny fandaniana ara-pahasalamana nateraky ny fitsaboana COVID-19. Vantany vao ankatoavina ny fangatahana dia havoaka ny taratasy fanamarinana elektronika manome alalana ny dia mankany Anguilla.
Ny mpandeha rehetra dia homena fitsapana PCR amin'ny fahatongavany, ary fitsapana faharoa dia hotontosaina amin'ny andro 10 amin'ny fitsidihan'izy ireo. Mandritra io vanim-potoana io dia afaka mankafy ny fampitaovana sy ny kojakoja rehetra ao amin'ny villa misy azy ireo izy ireo. Raha vantany vao miverina ny valiny ratsy aorian'ny fitsapana faharoa dia afaka mizaha ny nosy ireo vahiny avy eo.
Raha sendra fitsapana tsara dia tsy maintsy mitoka-monina any amin'ny toerana eken'ny governemanta ny vahiny. Voarara ihany koa ny fampiasana fiara manofa mandra-pahatongan'ny fahazoan-dàlana amin'ny andro 10. Marihina anefa fa tsy misy ny fepetra farafahakeliny tokony hipetrahana; malalaka ny mpitsidika hitsidika mandritra ny fotoana fohy kokoa ihany koa. Ny mpitsidika avy amin'ny firenena ambany toerana no homena tombony; ireo avy any amin'ny firenena tandindomin-doza dia hojerena isaky ny tranga, rehefa jerena ny toerana onenan'izy ireo.
Ny lisitry ny toeram-ponenana ankatoavina, indrindra amin'ny sehatry ny villa, dia ho hita eo amin'ny vavahady, satria ny trano rehetra dia tsy maintsy voasoratra anarana ary voamarina handray vahiny. Misy programa henjana momba ny fiofanana ho an'ny mpiasa ankehitriny. Marihina fa satria COVID- 19 izao no nosy, dia tsy voatery ny fanaovana sarontava. Na izany aza, ny vahiny eto amin'ny nosy dia antenaina hijerena ny halaviran'ny fiaraha-monina ary hanaraka ny fomba fanao amin'ny fahadiovana izay namela ilay nosy hitazona ny toerana notadiaviny tao anatin'ny efa-bolana lasa izay.
Ny komity iraisam-pirenena momba ny fizahantany dia mandray ny COVID-19
Teboka efatra nosoratan'i Sheraton Phuket Patong Beach Resort manonona General Manager vaovao